Mkpụrụ vaịn | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mkpụrụ vaịn
Apple dị iche iche "Swiiti" - anyị na-eto apụl maka ụtọ ezé
Taa, anyị ga-ekwu banyere ụdị dịgasị iche iche, mkpụrụ ya ga-abụ ezigbo ihe maka ndị hụrụ ụda chara. Ụdị apụl dị iche iche bụ "swiiti", gbasara mkpụrụ osisi, osisi na ome nke anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu n'isiokwu a. Na mgbakwunye na uru nke ụdị dịgasị iche iche, anyị ga-eche banyere adịghị ike ya, àgwà nke ịgha mkpụrụ osisi na ilekọta ya.
Esi esi esi nri
Arụrụ n'ụlọ wine compote nke ọtụtụ ndị na-ahụ ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ ụlọ na-eche nsogbu nke ịtu ụka nke beri ma ọ bụ mkpụrụ osisi mkpọ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọhụrụ brewed. Ka oge na-aga, otu ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ na ite na-enweta nsị na-atọ ụtọ. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla chetara na ọ ga-ekwe omume ịme mmanya nanị beri beri nke dabeere na "ihe ọṅụṅụ" nkịtị.
Mkpụrụ vaịn nke ngwakọ ụdị "Zilga"
Mkpụrụ buru ibu nke mkpụrụ vaịn n'oge dị iche iche "Zilga" bụ ndị a ma ama n'etiti Baltic, Belarusian, Norwegian, Swedish and Canadian winegrowers. Na ngwakọ nwere ụgwọ eluigwe na ala kpọrọ ruru ya egosipụta, elu ntu oyi eguzogide na mfe nke cultivation. A ga-atụle uru, ọghọm na atụmatụ nke nlekọta maka iche iche.